ဘရာဇီးနှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
အကောင်းဆုံး ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အေးဂျင့် နှင့်ရှေ့နေများ ဘရာဇီးလ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency နှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားဘရာဇီးရှိ Residency အစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များ၏နေထိုင်ခွင့်သည်ဘရာဇီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်၊ ဘရာဇီးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ ဘရာဇီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဘရာဇီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဒုတိယနေထိုင်မှု၊ ဘရာဇီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် dual Residency၊ , ဘရာဇီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ ဘရာဇီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်ခြင်း၊ ဘရာဇီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဘရာဇီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဘရာဇီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဘရာဇီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဘရာဇီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ဘရာဇီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ဘရာဇီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ဘရာဇီးရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်၊ ဘရာဇီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဘရာဇီးအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, ဘရာဇီးအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဘရာဇီးနိုင်ငံတွင်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏သံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဘရာဇီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဘရာဇီးမှရွှေဗီဇာ၊ ဘရာဇီးတွင်ရွှေဗီဇာ၊ ဘရာဇီးတွင်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဘရာဇီးတွင်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဘရာဇီးတွင်ဒုတိယဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဘရာဇီးတွင်ဒုတိယရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ နှင့်ဘရာဇီးရှိရွှေဗီဇာ၊ ဘရာဇီးရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံ၊ ဘရာဇီးရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဘရာဇီးရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ဘရာဇီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ဘရာဇီးတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - အမေရိကန်ဒေါ်လာ 40,000
လူ ဦး ရေသန်း ၂၁၀ ရှိပြီးဘရာဇီးသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည် (မေလ ၂၀၁၈) ။ လူ ဦး ရေ၏ ၅၀.၇% (တစ် ဦး ချင်းလူ ဦး ရေ ၉၇ သန်း) သည် ၄ ​​င်းတို့သည်အမှောင် (သို့) ရောနှောထားသောလူမျိုးနှင့် ၄၇.၇% (၉၁ သန်း) သည်လူဖြူများဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ဘရာဇီးသည်သုံးပိုင်းဒေသများသို့ထိ မိ၍ လဲသွားသည်။ တစ်ခုမှာအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာရှိ ၂၁ ကျွန်းကျွန်းစုဖာနန်ဒိုဒီနိုနိုဟိုင်းအတွက်သာဖြစ်သည်။ အခြေခံနိူင်ငံသည်အရှေ့ပိုင်းနှင့်အနောက်ပိုင်းဒေသများ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ အရှေ့ပိုင်းဒေသရှိပြည်နယ်အများစုသည် Daylight Saving Times ကိုသတိပြုမိကြသည်။
အမေဇုံသစ်တောမှသည်အလွန်ကောင်းသောအရှေ့ဘက်ကမ်းခြေအထိဘရာဇီးလ်နိုင်ငံသားများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီသည်နိုင်ငံ၏နယ်မြေကဲ့သို့အတက်အကျရှိသည်။ ဂျာမန်၊ အီတလီ၊ ဂျပန်၊ အာဖရိကနှင့်ဌာနေတိုင်းရင်းသားများစုဝေးမှုများအပါအ ၀ င်မည်သည့်ယဉ်ကျေးမှုကိုမဆိုအတူတကွပေါင်းစပ်ထားသောယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုစီသည်ရေရှည်တွင်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေပြီး၊
ကမ်းရိုးတန်း၊ မိုးသစ်တောအမျိုးမျိုးနှင့်မြို့ကြီးပြကြီးများတွင်သပိတ်မှောက်ခြင်းအားဖြင့်ဘရာဇီးသည်ထိုနိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်ဆုံးဖြတ်သူများအတွက်အခွင့်အလမ်းများစွာပေးသည်။ ဘ ၀ ၏လှုပ်ရှားမှုသည်စွမ်းအင်နှင့်စမ်းသပ်မှုနှစ်ခုလုံးဖြစ်သဖြင့်သင်၏ဘ ၀ သည်ဤအတိုင်းအတာနှင့်အတူအစဉ်မပြတ်ရွေ့လျားနေမည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်တစ်ခုမှာသံသယဖြစ်စရာမလို - ဘရာဇီးတွင်နေထိုင်ခြင်းသည်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်သည်။ ရီယိုသည်ဘရာဇီး၏မြို့တော်ဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်ယူဆခြင်းသည်ပုံမှန်မှားယွင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်နိုင်ငံ၏ပုံဆောင်အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ် Brasilia သည်မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ရီယိုဒီဂျနေရိုသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသကဲ့သို့နိုင်ငံသည်စားပွဲဝိုင်းသို့ယူဆောင်လာရမည့်အရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကြီးမားသောအရာအားအရိပ်အမြွက်ပြသည်။ ဘရာဇီး၏မြောက်ဘက်သည်အာဖရိကလူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်း၏သက်ရောက်မှုကိုများစွာခံရပြီးပုံမှန်ဆွဲဆောင်မှုများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ တောင်ဘက်သည်ဥရောပ၏အမွေအနှစ်ဖြစ်သည်။ နှင့်ဤအလယ်၌အားလုံးသည်ကျွန်းသစ်၊ စိမ့်မြေများ၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာပန်းခြံများ၊ အားကောင်းသောမြို့ပြဒေသများ၊ ဘာသာတရားအမျိုးမျိုးနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောတေးဂီတအမျိုးအစားများဖြစ်သည်။
လူအများစုကဘရာဇီးသည်မည်သည့်အရာနှင့်တူကြောင်းသူတို့နားလည်သည်ဟုထင်ကြသည်။ အဲဒီမှာနေထိုင်ပြီးနောက်မှာဒီဟာကရှုပ်ထွေးမှုနဲ့လူမျိုးရေးကွဲပြားခြားနားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဥရောပ၊ ဂျပန်၊ ဌာနေနှင့်အာဖရိကမျိုးနွယ်တို့၏သက်ရောက်မှုသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အမှန်တကယ်အရည်အချင်းများကိုစစ်မှန်သောပေါင်းစပ်မှုဖြစ်စေသည်။ ဘရာဇီးလ်တွင်လူတစ် ဦး ချင်း၏အသွင်အပြင်သည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ သင်ဝိုင်နီကိုကြိုက်ပါကအခန်းအပူချိန်တွင်သောက်သုံးခြင်းနှင့်နေသားတကျဖြစ်လိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ပိုမိုပူပြင်းသည့်ဒေသများတွင်မကြာသေးမီကသင့်အားရေခဲအိုးတစ်လုံး၌သင့်အားဝိုင်း ၀ န်းထားသောအနီရောင်ဝိုင်သောက်ခြင်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သာမန်စပျစ်ဝိုင်အာဏာပိုင်များအတွက်မှားယွင်းသောအယူအဆတစ်ခုဟုထင်ရသော်လည်းဘရာဇီးလ်နွေရာသီနှင့်သင်ကြုံတွေ့ရသည့်အခါသင်အနီ ၀ ိုင်အအေးကို ၀ တ်ပြုရန်လာရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘရာဇီးခမ်းနား; တကယ်တော့ဒါကအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူး။
ဥပမာဗီဇာ၊ အိမ်ဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်းတို့တွင်အရာဝတ္ထုများသည်သံသရာလည်ပတ်မှုတွေ့ကြုံရန်လိုအပ်သောအုပ်ချုပ်ရေးအလုပ်များလိုအပ်သည်။ အချို့သောအချိန်များ၌သင်ကြွေးကြော်ရန်နှင့်လက်နက်ချရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသင်မည်သည့်နေရာတွင်ပင်ရှိနေသည်ဖြစ်စေဘရာဇီးတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်နည်းလမ်းအတိုင်းပင်သင်မကြာမီသင်နားလည်သွားသည်။ ၎င်းသည်စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာဖြစ်သော်လည်းသေးငယ်သောအရာများသည်သင်၏ထိန်းချုပ်မှုမှလွတ်မြောက်ပြီးသင် (ရှုပ်ထွေးသော) စီးဆင်းမှုနှင့်အတူသွားရန်လိုအပ်သည်ဟုလျောက်ပတ်သောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအဖြစ်ဖြည့်သည်။ အချိန်တိကျခြင်းသည်ဘရာဇီးတွင်အလွန်သတိမဲ့သောအရာဖြစ်သည်။ ည ၈ နာရီတွင်စတင်မည်ဖြစ်သောသင်စုရုံးရန်စီစဉ်ထားသည့်အခွင့်အလမ်းတွင်ထိုအချိန်တွင်လူအများအပြားပေါ်လာလိမ့်မည်၊ ၎င်းကိုလုံးဝပုံမှန်အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ ချက်ချင်းနှင့်အချိန်မီလူတစ် ဦး ချင်းစီကိုစတင်နှောင့်ယှက်နိုင်သည်။ အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာပြသခြင်းဟာယေဘုယျအားဖြင့် ဦး စားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး၊ အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာအဲဒီခက်ခဲတဲ့အချိန်လိုအပ်ချက်တွေဆုံးရှုံးသွားတာနဲ့အမျှအခွင့်အရေးတစ်ခုခံစားရလိမ့်မယ်။
ဘရာဇီးလူမျိုးများသည်စိတ်အားထက်သန်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်အားသူတို့၏ခံစားချက်ကိုပြောပြရန်မစဉ်းစားပါနှင့်။ လူအများစုကမတူညီသောလူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဖောင်ဒေးရှင်းများမှလူတစ် ဦး ချင်းစီကိုအာရုံစူးစိုက်ခြင်း၊ ဒေါသထွက်ခြင်း၊ ဆန္ဒရှိခြင်းဟုခံစားရသောအခါအခြေအနေများကိုပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာဆန်းစစ်လိမ့်မည်။ ဘရာဇီးလ်ကမင်းကိုသဘောကျတယ်ဒါမှမဟုတ်ချစ်ရင်မင်းအဲဒီအရာကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ခံစားနေမှုကိုခံစားခွင့်ပေးသည်၊ သူတို့သည်အလားတူယေဘုယျအားဖြင့်မည်သည့်ဆိုးရွားသည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုအပြုသဘောကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။ ဤအရည်အချင်းများသည်သင့်အပေါ်စတင်ပေါ်ထွက်လာသည့်အခါတွင်အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အပူနှင့်စိုထိုင်းဆများတွင်နေထိုင်ပြီးနောက်သင် (တောက်ပသောရာသီတွင်အံ့သြလောက်အောင်အေးခဲသည့်ဘရာဇီးလ်တောင်ပိုင်းတွင်မှလွဲလျှင်) လက်တွေ့တွင်တည်ငြိမ်သောတောက်ပသောနေ့များနှင့်ပူနွေးသောရာသီဥတုရှိသည်ကိုမည်မျှခံစားရသည်ကိုသင်လေ့လာလိမ့်မည်။ နေရဲ့ဘယ်လောက်မယုံနိုင်စရာကောင်းလဲဆိုတာကိုသင်တွက်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်အေးပြီးမုန်တိုင်းထန်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုပြန်သွားဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ São Paulo ကဲ့သို့သောနေရာများသည်အလုပ်နှင့်စီးပွားရေးအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပင်လယ်ကမ်းခြေရှေ့တွင်ရီယိုဒီဂျနေရိုသို့မဟုတ်ရီဘီဖ်ကဲ့သို့သောမြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းတွင်နေထိုင်ပါက ပို၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသောလူနေမှုပုံစံကိုကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်။ အလုပ်နှင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းမှာ၎င်းကို လုပ်၍ ကောင်းစွာလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အိမ်သို့ပြန်ရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည့်အခါနီးကပ်လာခြင်းမရှိပါ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူအအေးခံဘီယာနှစ်စုံကိုတန်ဖိုးထားရန်ပင်လယ်ကမ်းခြေ၊ အပန်းဖြေစင်တာ၊ အပန်းဖြေစင်တာသို့ပြေးရန်သို့မဟုတ်ဘားသို့တိုက်ရိုက်ဖြစ်သည်။
ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
“ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ” (VIPER)
ဘရာဇီး၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အချိန်ထုတ်ယူခြင်း
PR စနစ်ဖြင့်ဘရာဇီးတွင် ၄ နှစ်ဆက်တိုက်နေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်။
ဘာကြောင့်ဘရာဇီးလ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့် Residency ကိုသွားရမလဲ
ဘရာဇီးသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချခြင်းသည်သင်ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်၊ အကယ်၍ သင်သည်သင်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ ၁၄၂၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆန္ဒရှိသည်မဟုတ်လျှင်။ ဘရာဇီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအစီအစဉ်သည်တိုင်းပြည်သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချရန်လွယ်ကူသော၊ ဤအစီအစဉ်သည်အခြားနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်လေးတတ်နိုင်သည်။
Residency ဘရာဇီးလ်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် insite
ဘရာဇီးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ဘရာဇီးလ်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုငွေပမာဏ BRL 500,000 (အက်ပလီကေးရှင်းဒေါ်လာ ၁၂၅k (သို့) ဒေါ်လာ ၁၄၂k) ရှိသည်။
ဘရာဇီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အတွက်အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ အိမ်ခြံမြေအတွက်ပထမ ဦး ဆုံး။ အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် BRL 500,000 ဖြစ်သင့်သည်။ အချို့သောသတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိစ္စရပ်များတွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ အခြေခံသုတေသနသို့မဟုတ်အသုံးချသုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် BRL ၁၅၀၀၀၀ မှ ၅၀၀၀၀၀ ကြားရှိပမာဏကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလည်းနည်းပညာဆိုင်ရာသို့မဟုတ်သိပ္ပံဆိုင်ရာနယ်ပယ်များတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် (၃) နှစ်အကြာတွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်ဟုပြသသည့်အစီရင်ခံစာကိုပြသရန်တာဝန်ရှိသည်။ ပထမဆုံးလုပ်သင့်သည်မှာကုမ္ပဏီကိုဖွဲ့စည်းပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အမြတ်အစွန်းရရန်လည်ပတ်နိုင်စွမ်းရှိသင့်သည်။ ၎င်းသည်အလုပ်နေရာလွတ်များကိုလည်းဖန်တီးရန်တာဝန်ရှိသည်။ လူတစ် ဦး သည်ဘရာဇီးတွင်နေထိုင်ပြီးနောက် ၄ နှစ်အကြာတွင်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရနိုင်သည်။ ထိုကာလကိုလျှော့ချရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်လူမှုဖူလုံရေးနံပါတ်ရရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဘရာဇီးဗဟိုဘဏ်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါမည်။ သင်၏ရန်ပုံငွေများကိုဗဟိုဘဏ်နှင့်ကုမ္ပဏီသို့လွှဲပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြီးကြပ်ပါမည်။ ရန်ပုံငွေများလွှဲပြောင်းပြီးနောက်, သင်သည်သင်၏လျှောက်လွှာတင်သွင်းပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်သင့်အားဘရာဇီးလ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားဗီဇာပေးလိမ့်မည်။ ဘရာဇီးကိုပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်သည့်အခါသင်၏ RNE“ Yellow Card” ကိုအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် ဘရာဇီးများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ဘရာဇီးများအတွက် ဖောက်သည်များနှင့်ဘရာဇီးရှိသူတို့၏မိသားစုများကိုဘရာဇီးမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုအထောက်အပံ့၊ ဘရာဇီးမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများသည်ဘရာဇီးမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဘရာဇီးမှ Golden Visa သို့မဟုတ်ဘရာဇီးမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ရုံသာမကဘရာဇီးမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကူညီသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လိုပါကအပြည့်အဝဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ဘရာဇီးသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ဘရာဇီးရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ငါတို့တတ်နိုင်တဆင့်ဘရာဇီးဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ , ဘရာဇီးအတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျ, ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင် Residency, ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကတတ်နိုင် Residency နှင့်ဘရာဇီးများအတွက်တတ်နိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီ
ဘရာဇီးမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဘရာဇီးရှိရွှေဗီဇာ။
ဘရာဇီးမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ဘရာဇီးမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ဘရာဇီးမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဘရာဇီးရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
ဘရာဇီးမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ဘရာဇီးလ်မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ဘရာဇီးမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘရာဇီးရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုဖောက်သည်သည်ဘရာဇီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လည်အမြတ်အစွန်းရရှိသင့်သည်ဟူသောအမြင်ဖြင့်ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သူတို့ Residency အတွက်ပြုလုပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထွက်ခွာသွားခြင်းကိုထောက်ခံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဘရာဇီးရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေထုတ်လုပ်သူအနည်းငယ်နှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးဘရာဇီးရှိကောင်းမွန်သောနေရာများတွင်ရှိနေပြီးအကောင်းဆုံးအကျိုးအမြတ်ကိုရရှိစေသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဘရာဇီး Residency
ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေမှ Residency သည်ဘရာဇီးသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သော Residency အတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ဘရာဇီးလ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ဘရာဇီးမှသို့မဟုတ်ဘရာဇီးသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင့်လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများကနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residence ကိုဘရာဇီး၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဘရာဇီးလ်၏ Residence Permit ရရှိရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်အတွက်ကန ဦး လျောက်ပတ်စွာစေ့စပ်သေချာမှုပြုလုပ်သည်။
ဘရာဇီးအတွက်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့်အတူဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များနှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုသည်။
ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်း။ ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့် Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ဖြည့်စွက်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
သင်နှင့်သင်၏မိသားစုသည်ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့် Residency အတွက်မှတ်တမ်းတင်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
ဘရာဇီးလ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုသင့်အားမျှဝေပြီးအခြားအထောက်အပံ့များအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ဘရာဇီးလ်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားဘရာဇီးလ်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှ Residency ကိုထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဘရာဇီးများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များကိုဘရာဇီးမှသို့မဟုတ်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဘရာဇီးများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖွငျ့ဖွစျသညျ ဘရာဇီးတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ဘရာဇီးလ်သို့ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ဘရာဇီးရှိတရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ဘရာဇီးများအတွက် ဘရာဇီးရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ
နေထိုင်ခွင့် ဘရာဇီးများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဘရာဇီးလ်ရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်ခြင်း၊ ဘရာဇီးတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်သောဘရာဇီးအတွက်တစ် ဦး ချင်းအားဘရာဇီးအတွက်အထောက်အပံ့မရနိုင်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ဘရာဇီးများအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ဘရာဇီးများအတွက် ဘရာဇီးရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဘရာဇီး ဘရာဇီးရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် ဘရာဇီးအတွက်ရှေ့ရပျ ဘရာဇီးရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ဘရာဇီးနှင့် KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျမှန်ကန်စေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်းဘရာဇီးရှိအာဏာပိုင်များမှလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်ဘရာဇီး၏တရားဝင်လိုအပ်ချက်များကြောင့် International Residency ၏ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဘရာဇီးအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုဘရာဇီးအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနေသည့်ဘရာဇီးလ်မှ dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
ဖောက်သည်များကိုထောက်ပံ့မှုပေးသောဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်ဘရာဇီးအတွက်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များသည်အတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
ဘရာဇီးအတွက်သင်၏ Residency မတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ဘရာဇီးအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပံ့ပိုးမှုအတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
Residency တွင်ဘရာဇီးအပါအ ၀ င်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကူညီပေးနေသည်။
ဥပမာအားဖြင့်သင်၏ Residency သည်ဘရာဇီးသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံ ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့်သူတို့၏အသက်များအပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ပါ။ ဘရာဇီးအတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့်အခြားအခကြေးငွေများဖြင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ဘရာဇီးများအတွက်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ဘရာဇီးလ်တွင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူဘရာဇီးသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဘရာဇီးအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်၊ ဘရာဇီးတွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
Residency မှလွဲ၍ ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းဖြင့်ဘရာဇီးတွင်လည်းစီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။ ဘရာဇီးနှင့်အခြားနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်ဘရာဇီးအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်သင်မတွေ့ပါ။
ဘရာဇီးအတွက်မိသားစုများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဘရာဇီးလ်နှင့်နိုင်ငံတကာမှကူညီခြင်းဖြင့်ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏ Residency ကိုကျော်လွန်သောလမ်းကိုထောက်ခံသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ဘရာဇီးမှာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် or Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (ဘရာဇီးလ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
ဘရာဇီးသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ဘရာဇီးအတွက်ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် ဘရာဇီးရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, ဘရာဇီးအတွက်အတိုင်ပင်ခံလိုအပ်ပါတယ် ဘရာဇီးအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ဘရာဇီးရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် ဘရာဇီးကိုမင်းအစီအစဉ်ဆွဲမယ်ဆိုရင် ဘရာဇီးလ်ရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် ဘရာဇီးအတွက်ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
ဘရာဇီးရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ဘရာဇီးရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ဘရာဇီးအတွက်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဘရာဇီးအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ဘရာဇီးအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ဘရာဇီးများအတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, ဘရာဇီးအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ဘရာဇီးရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
ဘရာဇီးအတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း
ဘရာဇီးမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဘရာဇီး.
အောက်ဖော်ပြပါ IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုဘရာဇီးလ်တွင်ပေးပါသည်
ဘရာဇီးအတွက် Web ဒီဇိုင်း
ဘရာဇီးလ်တွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဘရာဇီးအတွက် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
ဘရာဇီးအတွက် App Development
ဘရာဇီးအတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဘရာဇီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုဖြင့်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဘရာဇီးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ဘရာဇီးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ဘရာဇီးတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ ဘရာဇီးတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ဘရာဇီးနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာသက်တမ်းရှိသည်။
ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency မှသင့်ကိုယ်စားတရားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားလုံးအတွက်ဘရာဇီးအတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ သင်သည်ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံသို့ရောက်နေလျှင်သို့မဟုတ်ဘရာဇီးလ်သို့လည်ပတ်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင့်အားသင်၏ရှေ့နေအားဤနေရာတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဘရာဇီးအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ပါကဘရာဇီး၏ပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်ဘရာဇီးကောင်စစ်ဝန်ရုံးကအက်ပယ်နယ်လ်သို့မဟုတ်တရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏နေထိုင်ခွင့်
စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ဘရာဇီး၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဘရာဇီး၏နေထိုင်မှုကိုဘရာဇီးတွင်နေထိုင်ခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဘရာဇီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ရန်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ဘရာဇီးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်း၊ ဘရာဇီးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်း၊ ဘရာဇီးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှထောက်ပံ့ခြင်း ဘရာဇီးမှာ။
ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ဘရာဇီးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခွင့် ဘရာဇီးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်ခွင့် ဘရာဇီးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်မှု
ဘရာဇီးသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဘရာဇီးတွင်စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းဖြင့်ဘရာဇီး၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဘရာဇီး၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဘရာဇီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဘရာဇီးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ဘရာဇီးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားနှင့်ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းကိုလျှောက်ထားပါ။ အကောင်းဆုံးမှာဘရာဇီးလ်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များနှင့်ဘရာဇီးလ်ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။
ဘရာဇီးအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု ဘရာဇီးရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ဘရာဇီးရှိတတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှရှေ့နေများ ဘရာဇီးရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ဘရာဇီးအတွက်တတ်နိုင်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေး | ဘရာဇီးအတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ဘရာဇီး၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဘရာဇီး၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းစသည်တို့ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဘရာဇီးသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဘရာဇီးအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ဘရာဇီးလ်တွင်အကောင်းဆုံးဒုတိယပတ်စ်ပို့ရှေ့နေများနှင့်ဘရာဇီးအတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယပတ်စ်ပို့အကြံပေးများ၊ ဘရာဇီးလ်တွင်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဘရာဇီးလ်ရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်။
ဘရာဇီးအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု ဘရာဇီးရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ဘရာဇီးတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဘရာဇီးနိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဘရာဇီးအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
ဘရာဇီးရှိရွှေဗီဇာကိုအစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့ဖြင့်ဘရာဇီး၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဘရာဇီး၏နေထိုင်ခွင့်ကိုရရှိခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဘရာဇီးသို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ ဘရာဇီးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ဘရာဇီးမှအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ဘရာဇီးအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဘရာဇီးရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဘရာဇီးရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ဘရာဇီးအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
ဘရာဇီးအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ဘရာဇီးရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ဘရာဇီးရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဘရာဇီးရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဘရာဇီးအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
ဘရာဇီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
ဘရာဇီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘရာဇီးရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်ဘရာဇီးရှိအေးဂျင့်များသည် Residency ကိုဘရာဇီးလ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။
ဘရာဇီးသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များကြောင့် Residency သည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ဘရာဇီးလ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ Residency အတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြေးကိုသာပေးဆောင်ရသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုဖြင့် Residency အတွက်အခြားအထောက်အပံ့များစွာကိုလည်းပေးသည်။
ဘယ်နိုင်ငံမှနေထိုင်သူများသည်ဘရာဇီးလ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဘရာဇီးလ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဗီဇာဖြင့် Residency လျှောက်ထားနိုင်ပါသလဲ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုမည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအနည်းငယ်မှအာရှမှဘရာဇီးသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အာဖရိကမှဘရာဇီးသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဥရောပမှဘရာဇီးသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ တောင်အမေရိကမှဘရာဇီးသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ မလေးရှားမှဘရာဇီးသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှဘရာဇီးသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှဘရာဇီးမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ Residency၊ သီရိလင်္ကာမှဘရာဇီးသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ နီပေါမှဘရာဇီးသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ အိန္ဒိယမှဘရာဇီးမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ယူအေအီးမှဘရာဇီးမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု ဘရာဇီးများအတွက်
ဘရာဇီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
ဘရာဇီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများ Passenger Land
ABRAVIDRO - ဘရာဇီးလ်ဖြန့်ဖြူးသူများနှင့်ဖန်ထည်ထုတ်လုပ်သူများအသင်း
နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန www.mre.gov.br
ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန www.mdic.gov.br
အိန္ဒိယ - ဘရာဇီးကုန်သည်ကြီးများအသင်း http://www.indiabrazilchamber.org/en/
ဘရာဇီး Foundry Association
ဘရာဇီး Fine Chemical Industry, Biotechnology နှင့် ၄ င်း၏အထူးပြုပစ္စည်းများ
ဘရာဇီး Aluminum အသင်း
ကြွေ tile ထုတ်လုပ်သူများ၏အမျိုးသားအသင်း
တရားမျှတသော Promoters ၏ဘရာဇီးပြည်ထောင်စု
Glass Automatic Industries ၏ဘရာဇီးနည်းပညာဆိုင်ရာအသင်း
ဘရာဇီး Mineral Water Industry Association
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများစက်မှုလုပ်ငန်းအသင်း၊ မွှေးကြိုင်သောဓာတုပစ္စည်းများ၊ ရေမွှေးများ၊
Cargo Express အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများမှဘရာဇီးအသင်း
São Paulo ၏ဆေးနှင့်အရောင်တင်ဆီများ၏ Syndicate
ကွန်ကရစ် ၀ န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများ၏ဘရာဇီးအသင်း
ဘရာဇီး၏ဗဟိုဘဏ် (BCB): http://www.bcb.gov.br/pt- br/paginas/default.aspx
ဘရာဇီးစက်မှုလုပ်ငန်း၏ Portal ကို: http://www.portaldaindustria.com.br/cni
ဘရာဇီးတင်ပို့မှု - နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုhttp://www.comexbrasil.gov.br/
အထည်အလိပ်နှင့်အ ၀ တ်အထည်လုပ်ငန်းဘရာဇီးအသင်း
link ကိုမှ ဘရာဇီး၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ဘရာဇီးလ်တွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်